ဖွဲနုဆီ၊ နေကြာဆီ၊ ပဲပိစပ်ဆီ ဘယ်ဆီကောင်းလဲ – Healthy Life Journal
မေး. ဖွဲနုဆီ၊ နေကြာဆီ၊ ပဲပိစပ်ဆီ ဘယ်ဟာက ကျန်းမာရေးအတွက် အကောင်းဆုံးပါလဲခင်ဗျာ။
Kyaw Zin (FB)
ဖြေ. ပြည့်ဝဆီပါဝင်မှုအချိုးအရဆိုရင် နေကြာဆီ၊ ပြောင်းဖူးဆီတွေဟာ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင်နဲ့ ပြည့်ဝဆီပါဝင်ပြီး ဖွဲနုဆီ၊ မြေပဲဆီ၊ ပဲပိစပ်ဆီတွေက ၁၅-၂၀ရာနှုန်းပါဝင်ပါတယ်။ ပြည့်ဝဆီပါဝင်မှုနည်းလေ ကောင်းလေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုပြောတာက အကြမ်းဖျဉ်းပြောတာပါ။ ကျန်းမာရေးအတွက်ဆိုရင်တော့ ဘယ်ဆီပဲဖြစ်ဖြစ် လျှော့သုံးဖို့လိုပါတယ်။
Related Items:Nutrition, oil